Madaxweynaha Puntland iyo madaxda qaar ka mid ah Maamul goboleedyada oo Muqdisho ku soo fool leh – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Puntland iyo madaxda qaar ka mid ah Maamul goboleedyada oo Muqdisho ku soo fool leh
4th February 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas iyo madax kale oo ka socota Maamul goboleedyada ayaa saaka lagu wadaa inuu booqasho ku yimaado magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya.
Sida ay sheegayaan wararka Madaxda qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ayaa la filayaa inay kulamo la qaataan madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Madaxweynaha Puntland iyo madax kale oo ka socota Maamul goboleedyada ay ka qeyb geli doonaan shir ka dhici doona magaalada Muqdisho oo looga hadlayo la tashiga aayaha Soomaaliya iyo Hiigsiga cusub ee sanadka 2016.
Sidoo kale Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa isna la filayaa inuu maanta soo gaaro magaalada Muqdisho, iyadoo shalay uu Muqdisho soo gaaray Madaxweynaha Maamulka Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ka soo kicitimay Baydhabo.
Safarka Saddexdan Madaxweyne ayaa warar kala duwan ka soo baxayaa, waxaana la sheegaya inay muqdisho u imaanayan labo weji oo kala ah la tashi ku saabsan dhismaha Xukuumadda cusub iyo arrimo ku aadan mideynta Ciidamada gobolada dalka ku sugan.
Ammaanka magaalada Muqdisho ayaa si aad ah loo adkeeyay, iyadoo la xiray wadada Maka Al-Mukarama iyo wadada aada garoonka diyaaradaha oo ay qeyb ka xiran tahay, halkaasoo ay ciidamo ku sugan yihiin.